आहा! शौचालय! - China Radio International
(GMT+08:00) 2015-07-14 16:03:37
तारे होटल त सबैले सुनेकै कुरा हो। एक तारेदेखि पाँचतारेसम्मका होटल हाम्रै नेपालमा थुप्रै छन्। नेपालको छिमेकी मुलुक चीनको राजधानी बेइजिङमा तारे होटलकै हाराहारीमा तारे सार्वजनिक शौचालय छन्। सुन्दा पनि अनौठो लाग्छ। तर बेइजिङमा एक तारदेखि चार तारेसम्मका सार्वजनिक शौचालयको संख्या 70 वटा छ। आगामी दुई वर्षमा बेइजिङका मुख्य पर्यटकीय स्थलहरुमा थप 64 वटा चारतारे, 197 वटा तीनतारे र 118 वटा एकतारे सार्वजनिक शौचालयहरु निर्माण हुँदैछन्। दुईवर्षपछि बेइजिङमा तारे सार्वजनिक शौचालयको संख्या 449 पुग्नेछ।
सार्वजनिक शौचालयको क्षेत्रफल, सरसफाइ, सुविधा, खुल्ने समय आदिका आधारमा स्तर निर्धारण गरिन्छ। ननस्टार सार्वजनिक शौचालय जताततै भए पनि तारे सार्वजनिक शौचालयहरु चाहिँ पर्यटकीय स्थलमा बनाइएका छन्। एकतारे सार्वजनिक शौचालय हुनका लागि कम्तिमा 40 वर्गमिटर क्षेत्रफल हुनुपर्छ भने दुई तारे हुनका लागि 60 वर्गमिटर क्षेत्रफलको हुनु पर्नेछ। त्यसैगरी तीनतारेका लागि 80 वर्गमिटर र चारतारेका लागि 100 वर्गमिटर क्षेत्रफलको हुनुपर्छ। ती तारे सार्वजनकि शौचालयमा ट्वालेटपेपर, ऐना, आकस्मिक घन्टी, पृष्ठभूमि संगीत, हात सुकाउने ड्रायर मेसिन, साबुन तथा लोसन अनिवार्य हुनुपर्छ। त्यसैगरी सबै तारे सार्वजनिक सौचालयमा पुरुष र महिलाको कक्ष अनुपात 4:6 हुनुपर्छ।
चीनमा सबै सार्वजनिक शौचालय निःशुल्क रुपमा उपलब्ध छन्। सहरी क्षेत्रमा7सय मिटरको फरकमा जहाँसुकै सार्वजनिक शौचालय छन्। तर पनि अत्यधिक पर्यटकको चापले गर्दा सरकारले अझै पनि सार्वजनिक शौचालयको संख्या अपुग भएको भन्दै थप्ने योजना बनाएको छ।
चीनको राष्ट्रिय पर्यटन प्रशासन कार्यालयले सन् 1990 मा सार्वजनिक सौचालयको मर्मत तथा निर्माण गर्नका लागि बीस लाख युआन छुट्ट्याएको थियो। 1990 पछि पैचिङले चार करोड युआन सार्वजनिक शौचालयमा मात्र लगानी गरिसकेको छ। 1997 पछि हरेक वर्ष कम्तिमा 20 पर्यटकीय स्थलमा सार्वजनकि सौचालय निर्माणका लागि 15 लाख युआन खर्च गर्दै आएको छ।
बेइजिङको स्तरीय विकास सन् 2008 को 29 औँ गृष्मकालीन ओलम्पिक खेलकूददेखि भएको हो। बेइजिङको सार्वजनिक शौचालयको स्तर पनि त्यही समयदेखि व्यापक रुपमा परिवर्तन गरिएको हो। पहिले पहिले पुरुष शौचालय महिलाको शौचालयको तुलनामा दोब्बर ठूला हुन्थे भने अहिले महिला शौचालयका कोठा ठूला बनाइएका छन्।
तारे शौचालयमा महिला र पुरुष बाहेक बृद्धवृद्धा र केटाकेटीहरुका लागि पनि छुट्टै स्थान निर्धारण गरिएको हुन्छ। त्यसैगरी कम्तिमा एउटा कोठा अपाङ्गहरुका लागि अनिवार्य बनाउनु पर्ने नीति रहेको छ। तीन तारे र चार तारे सार्वजनिक शौचालयमा शिशुहरुलाई न्याप्किन फेर्ने सुविधा सहितको स्थान पनि बनाइएको छ। अनि न्याना टावेल र विभिन्न लोसनहरु पनि राखिएको हुन्छ।
तारे शौचालय बाहेक आगामी दुई वर्षमा 148 पर्यटकीय स्थानमा 747 वटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण हुँदैछन्। सन् 1990 मा बनेका शौचालयहरुमा फ्लस गर्ने प्रणाली थियो भने अहिले उच्च प्रविधियुक्त शौचालयमा फ्लस राखिएको छैन जसले पानी र वातावरणको संरक्षण गर्छ। उच्च नयाँ प्रविधिमा आधारित नयाँ शौचालयहरुमा दिसा र पिसाबलाई भेला गरेर कम्पोष्ट मल बनाउने प्रविधिको विकास गरिएको छ। विद्युत खपत जोगाउनलाई हरेक शौचालयमा सोलार प्यानल जोडिएका छन्।
सार्जनिक सौचालय निर्माणमा मात्र विगत6वर्षमा बेइजिङ नगरपालिकाले चालीस करोड युआन खर्च गरिसकेको छ। अहिले बेइजिङमा पाँच हजार सार्वजनिक शौचालयहरु छन्। सार्वजनिक सौचालयका हिसाबले यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो सहर बन्न पुगेको छ।
सन् 2000 मा चीनले ओलम्पिक खेलको आयोजना गर्न नपाएको बेइजिङमा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था राम्रो नभएकै कारणले थियो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले आरोप लगाएपछि चीनको केन्द्रीय सरकार र बेइजिङ नगरपालिकाले सार्वजनिक शौचालयको स्तर वृद्धि गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्‍यो। फलस्वरुप चीनने सन् 2000 देखि सन् 2008 सम्ममा 305 पर्यटकीय स्थलमा 452 वटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरेको थियो। सन् 2005 मा मात्र बेइजिङ नगरपालिकाले 14 हजार पाँच सय शौचालयहरु (सार्वजनिक तथा कार्यालय र निजी समेत) मर्मतका लागि 18 करोड युआन खर्च गरेको थियो।
सन् 2004 मा बेइजिङले विश्व शौचालय शिखर सम्मेलनको आतिथ्य गरेको थियो। जहाँ 19 देशका 150 जना प्राज्ञ, स्वाथ्यकर्मी, सौचालय डिजाइनर र वातावरणविदहरु सहभागी थिए। फिनल्याण्ड, जापान, नेपाल र अमेरिका लगायतका देशहरुले सो शिखर सम्मेलनमा भाग लिएका थिए।
बाहिरबाट हेर्दा चिटिक्क परेका र राम्रा दरवारको डिजाइनमा रहेका घरहरु कुनै भव्य बंगला नभएर सार्वजनिक शौचालय हुन् भन्ने कुरा भित्र पसेपछि मात्र थाहा पाइन्छ। त्यहाँको सरसफाइ र व्यवस्था देखेर सबैले भन्छन् आहा! शौचालय!